ऊ फोन उठाउन बाथरूम भित्र पसि… | नेपाली जनता :: Nepali Janta: Nepali News Portal
प्रकाशित मिति १२ बैशाख २०७५, बुधबार १८:०० लेखक नेपाली जनता
अचानक उसको फोनको घण्टीले ऊ फेरि असहज भई र म रोकिन बाध्य भएँ। उसको फोनको घण्टी लगातर बजिरहयो र उसका कठोर आँखाहरू त्रासले अलि बिचलित जस्ता देखिए। ऊ फोन उठाउन बाथरूम भित्र पसि। उसले सानो स्वरमा हेलो भनेकी थिई तर उताबाट कुनै नाबालकको चर्को रोदन यहाँ मेरो कानसम्मै ठोकिन आइपुग्यो।
तर, बाल रोदनको पृष्ठभूमिमा दुई महिलाहरू बिचको संवाद मैले बुझ्न सकिनँ। ऊ केही क्षणमा फर्केर आउँदा बिद्रोही जस्ता लाग्ने उसका असन्तुष्ट एकजोडा आँखाहरू विवश र रसिला देखिएका थिए।
ऊ फोन उठाउन फेरि बाथरुम पसि। मसँग अफसोश गर्नुको बिकल्प थिएन। तर, यो पटक मैले अफसोश मात्रै गरिनँ जान्न चाहेँ उसको निजी जीवनको पर्दा पछाडि नियतिको कस्तो नाटक मञ्चन भईरहेको छ। वास्तवमा हामी सबै आज आवरणमा देखिए जस्तै कुनै क्यानभासको चित्र त होइनौं। पर्दा पछाडि आफ्ना आफ्ना इतिहास लुकाएर वर्तमानमा अरू नै केही हुनुको अभिनय गर्न अभिसप्त पनि त छौं।
आज म किन्न अभिसप्त छु र उ बेच्न विवश छे। मैले उसका पर्दा भित्रको शरीरको लालच त्यागेर उसका निजी जीवन भित्र चिहाएर हेर्ने गल्ती गरेँ। जसले घनघोर निन्द्रामा परेको अथवा निदाएको अभिनय गरिरहेका मेरा संबेदनालाई बिउँझिन बाध्य बनाईदिएको थियो। ‘घरबेटीले थाहा पाएछ! सबै सामान बाहिर फ्याक्देर कोठामा ताल्चा लगाएको छ।
राति नै निस्केर जा भनेको छ जाडोले बाबु रोएर मर्न लागिसक्यो। ज्वरो पनि आएको छ। उल्टि पनि गर्दैछ। जसरी हुन्छ झट्टै आउनू। छोड्दिनु ग्राहक साहक !’ यसपटक बाल रोदन बन्द थियो। तर, उताबाट कुनै नारीस्वर घरबेटीले थाहा पाएर घर निकालामा परेको कुरा सुनाउँदै थिई। ऊ भने चुपचाप सुनिरहेकी थिई।
पूर्बेली ठिटोले फोन बन्द गरेको थियो। उसले पनि एक/ दुई ठाउँ प्रयास गरि। तर, कोही उपलब्ध भएन। त्यसपछि हामी त्यो अध्यारो गल्लीहुँदै सडकमा निस्कियौं। धेरैबेर भौतारिएपछि बल्ल एउटा ट्याक्सी भेटियो। ट्याक्सी लिएर उसको कोठा पुग्दा दृश्य दारूणिक थियो। सुत्ने ओछ्यानदेखि भाँडाकुँडा सबै बाहिर फ्याकिदिएर कोठामा ताल्चा लगाएको रहेछ घरबेटीले। कारण थियो-उसले शरीर बेचेर त्यही आफ्नो र छोराको शरीर धान्नु।
सायद उनीहरूले ग्राहकका निम्ति मात्रै लिएको भर्खर हामी फर्किएको कोठाको कुरा गर्दै थिई उसले। त्यो रात उसको छोरालाई फार्मेसीमा जचाँएर निमोनियाको दबाई लिएपछि दुबै आमाछोरालाई गेष्ट हाउसमा लिएर आएँ। श्रीमती र छोरा भनेर गेष्टहाउसको खातामा ढाँटेर नाम लेखाएँ।
एक रातको क्षणिक र भ्रामक त्यो अनाम सम्बन्धले मलाई धेरैपछि पारीवारिक हुनुको सुखद् अनुभूति गराएको थियो। त्यो नाबालकको टाउको छामे ज्वरो अलि घटेर निदाउन सक्ने भएछ। आमा चै पनि भर्खरै निदाएकी थिई। अचानक र अनायासै भइरहेको सुखद अनुभूतिले हल्का भएको मेरो मन मस्तिष्कलाई बिस्तारै निन्द्राले छोप्दै लगेको थियो।
Post View Count: 87
लैनचौरमा मोटरसाइकल दुर्घटना, एकको मृत्यु
काठमाडौं । लैनचौरमा मोटरसाइकल दुर्घटना हुँदा एक जनाको मृत्यु भएको छ ।
निर्वाचनमा ११ अर्ब खर्च: १० वर्षमा २६८ प्रतिशतले वृद्धि, मतदाताको टाउकोमा रु. ७०० भार !
काठमाडौँ। सन् २०१२ मा केही उत्साही युवाहरुले स्थापना गरेको फ्याक्टस नेपालले…
५ वर्ष मुनिका ३६ प्रतिशत बालबालिकामा दीर्घ कुपोषण तथा पुड्कोपनको समस्या, प्रदेश ६ सबैभन्दा पीडित
काठमाडौँ । नेपालमा ५ वर्ष मुनिका बालबालिका करिब २७ लाख रहेका…
महिलाहरुलाई यौन सन्तुस्टि दिन पुरुषले जान्नै तथ्य
काठमाडौं । यौन सबैको चासोको विषय हो । त्यसैले यौन सँग सम्बन्धित विषयहरुमा हाम्रो बढि रुची हुन्छ । तर…
शरदकुमार गौचनको हत्यामा संलग्न मुख्य अभियुक्तसहित ३ जना पक्राउ
काठमाडौं । निर्माण व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष शरदकुमार गौचनको हत्यामा संलग्न रहेको…
विकिनी सुटपछि टपलेस भइन् इ
केही दिन अघि मात्रै बिकनी फोटो सार्वजनिक गरेर चर्चामा आएकी नायिका इशा गुप्ताको टपलेस फोटो सार्वजनिक भएको छ…